नेकपा स्थायी समिति बैठकमा छलफलको मोडालिटि कस्तो हुनुपर्छ ? – SunkoshiNews
हेड काउन्ट : रेशम चाैधरीसमेत यादव पक्षमा ३५ , ठाकुरमा १६ जना
यो सरकारलाई राष्ट्रिय सरकार बनाउँ : गजुरेल
पाए शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत
ओली मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठक : ६ अर्ब बक्यौता नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको म्याद फेरि थप
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा गच्छदारसँग १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग
अति बिपन्न, अनाथ र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई सुनकाेशी गाउँपालिकाले दियो छात्रवृत्ति
अन्तर्वार्ता/विचार • हेडलाईन न्युज
नेकपा स्थायी समिति बैठकमा छलफलको मोडालिटि कस्तो हुनुपर्छ ?
सुनकोशी न्युज, २०७७ वैशाख १७ गते,
यतिखेर नेपाली समाज गंभीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगैै कोरोनाको संकटले लकडाउन पनि थपिदै गएको छ । मुख्यतः राजनीतक अस्थिरताको छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गरेर कोरोनाबिरुद्धको लडाईमा एकजुट भइ यसमाथि विजय हासिल गर्न आवश्यक छ । यतिखेरको राजनीतिक पार्टीहरु, संसद र सरकार नयाँ संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसार चल्नुपर्नेमा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, पुरानै तरिकाले चलिरहेका छन् । जनअपेक्षा अनुसार परिणाम आउन सकेको छैन । जसका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यसो हुनुका पछाडि मुख्यत दुई कारण छन् । पहिलो, जनताको चेतना भन्दा राजनीतिक दलहरुको चेतना पछाडि हुनु । दोश्रो, २००६ सालमा स्थापना भएको नेकपा क्रमभंग गरेर नयाँ पार्टी बने पनि संचालनको तरिका पुरानै हुनु ।
यतिखेर नेकपाभित्र भुसको आगोको रुपमा रहेको अन्तरविरोध दुई अध्यादेश आएपछि दावानल बनेर एकीकृत पार्टीको भविष्यमाथि नै चुनौति खडा गरिरहेको छ । जुन अध्यादेशको खारेजीपछि पनि कायमै छ । कोरोनाबिरुद्ध लड्नुपर्ने समयको चापको बीचमा पनि विवादको समाधानका उपायहरुको खोजी गर्नै पर्छ । कोरोना महामारीको बेला छलफल किन गर्ने भन्न पनि सकिन्छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र उत्कर्षमा पुगेको अन्तरविरोधलाई मत्थर र समाधान गर्न सकिएन भने कोरोनाबिरुद्धको संघर्षमा विजय हासिल गर्न निकै गारो पर्नेछ । यसर्थ, समाधानका उपायहरुबारे पार्टीका विभिन्न वृत्तमा छलफल चलिरहेको छ । यसलाई नकारात्मक रुपमा लिन मिल्दैन । यो बहसले समस्यााको समाधान निकाल्नैपर्छ ।
अहिले पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोध समाधानका लागि सचिवालय र स्थायी समितिको बैठक बस्ने कुरामा दुवै अध्यक्षबीच सहमति भएको छ । स्थायी समितिको बैठकको मोडालिटीबारे सचिवालयमा छलफल आवश्यक देखिन्छ । मेरो विचारमा बैठक संक्षिप्त हुनुपर्छ र तीन स्टेपमा छलफल चलाउनुपर्छ ।
१. सचिवालय र दुई अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको म्यान्डेटअनुसार काम हुन नसक्नुका कारणहरु के के हुन् ? सचिवालय सदस्यहरु र दुई अध्यक्षहरुको भूमिका कहाँ पुगेन ? भन्नेबारे गहन छलफल हुनुपर्छ । स्थायी समितिका सदस्यहरूले उठाएका कुराहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ नेतृत्वले दिनैपर्छ ।
२. नयाँ सिस्टमको गाडी आएपछि या त पुरानो डाइभरले नयाँ सिस्टम अनुसार आफूलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ वा नयाँ सिस्टम जानेको डाइभर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर कसैले मैले वर्षौंदेखि गाडी चलाउदै आएको हुँ, सजिलै चलाइहाल्छु नि भनेर आफूलाई अपग्रेड नगरी नयाँ सिस्टमको गाडी चलायो भने सिस्टम मात्र ध्वस्त हुने होइन, दुर्घटना पनि हुन्छ । यसर्थ, समस्याका प्रमुख र सहायक कारणहरु निक्र्यौल हुनु जरुरी छ । पार्टी नयाँ हुने, तर नीति, विधि, संगठन, कार्यशैली र आचरण पुरानै हुँदा यो समस्या आएको हो वा पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिकै भूमिकाका कारणले यी समसयाहरु आएका हुन् भन्ने करामा छलफल केन्द्रित हुन जरुरी छ । नेतृत्वको भूमिका नै नपुगेको हो भने नेतृत्व बदलेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर मलाई के लागि रहेको छ भने नेकपाको विचारको मूलभूत पक्ष ठिक छ तर त्यो विचारलार्य व्यवहारमा उतार्नको लागि नयाँ नीति, विधि, संगठन, कार्यशैली र आचरणको आवश्यकता पर्दछ । यी चिजहरु विकास गर्न नसक्दा अन्तरविरोध समाधान भइरहेको छैन । व्यक्तिको भूमिका नपुगेको कुरा सहायक कारण हो । त्यसैले दोस्रो स्टेपमा नयाँ पार्टी र यसले निर्धारण गरेको समाजवादी लक्ष्यलाई बोक्ने नयाँ नीति, विधि, संगठन, कार्यशैली र आचरणको आवश्यकता पर्दछ । अन्यथा, पार्टी अन्तरविरोधको गोलचक्करमा फसिरहन्छ ।
३. पात्रबारे छलफल हुनुपर्छ । सिंगो मुलुक र पार्टीलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यक्तिको पहिचान गर्नुपर्छ । अहिले भएका व्यक्ति वा नेतृत्वकर्ताले नयाँ नीति, विधि, संगठन, कार्यशैली र आचरण अनुसार नेतृत्व गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरामाथि बहस हुनुपर्छ । नयाँ नीति, विधि, संगठन, कार्यशैली र आचरणमा नयाँ मान्यता विकास नगरी व्यक्तिलाई मात्रै बदलियो भने नयाँ आउने नेतृत्वलाई पनि काम गर्न सहज हुन्न । बाँकी अढाई वर्ष पनि यिनै समस्याहरु पुनरावृत्ति भइरहन्छन् जुन पार्टीका लागि कदापि हितकर होइन । डायस अनुपयुक्त भएर पैदा भएको समस्या हो कि मेसिन चलाउने व्यक्तिमा समस्या हो, छुट्याउन सक्नुपर्छ । डायसमा त्रुटी छ भने मेसिन चलाउने मिस्त्री बदलेर समस्या समाधान हुदैन, डायस नै नयाँ निर्माण गर्नपर्छ । डायसको त्रुटी सच्याइसकेपछि मेसिन चलाउने मिस्त्रीबारे छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बैठकबाट समस्या समाधान गर्छु भनेर मात्रै हुदैन, बैठकका एजेण्डा र छलफलका मोडालिटिहरु पनि वैज्ञानिक हुन जरुरी छ । हाम्रा बैठकका मोडालिटिहरु पुरानै हुँदा बैठक लामा हुने र समस्याको उपयुक्त समाधान निकाल्न नसक्ने हुने गरेका छन् । त्यसैले, आज बस्दैगरेको सचिवालयले बैठकका एजेण्डा र छलफलको मोडालिटि वैज्ञानिक बनाउन जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १७, २०७७
नेपाललाई ओलीका तीन प्रलोभन, संसदको गणितीय खेल सुरु, किनबेचको सम्भावना अधिक
नेकपा सचिवालय बैठक निष्कर्षविहीन, अर्को बैठक वैशाख २० गते
नियुक्ति सच्याएपछि देउवाले लिए सपथ, माओवादीका शर्मा अर्थ र पम्फा उर्जामन्त्री नियुक्त
सर्वोच्चमाथि असन्तुष्टि पाेख्दै बिदा भए ओली
माओवादी केन्द्र काठमाडौंको नाै दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले अदालतकाे फैसला प्रभावित पार्न खाेजे, हामीलाई अपमान गरे :नेता नेपाल